Qareen u dhashay Imaaraadka Carabta ayaa dacweeyay shisheeyaha jooga wadankiisa – Mogadishutimes
Qareen u dhashay Imaaraadka Carabta ayaa dacweeyay shisheeyaha jooga wadankiisa
Qareen u dhashay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa dacwad ku soo oogay shisheeyaha wadankiisa jooga. Mohammad al-Ansari wuxuu maxkamada ka codsaday in si ku meel gaar ah loo joojiyo driver licenada shisheeyaha.
Wuxuu qareenka sabab uga dhigay dacwadiisa baabuurta oo aad uga badatay wadooyinka. Wadanka Imaaraadka waxaa ku sugan shisheeye lagu qiyaasay 3.1 milyan halka dadka wadanka u dhashayna yihiin 1.35 milyan.
Siyaasiyiin badan ayaa ka caraysan tirada badan ee shisheeyaha ee wadankooda joogta. Qaar ka mid ah ayaa ku taliyay in aysan ka badan dadka wadanka u dhashay.
Shisheeyaha waxaa hadda lagu xiraa si ay licen u qaataan shahaado jaamacadeed, labo kun oo dollar bishii oo shaqo ah iyo in ay si sharci ah ugu nool yihiin wadanka ugu yaraan labo sano. Dad badan ayaa ku raacsan dacwada qareenka.
Askari Soomaali ah oo lagu leexsaday airport-ka New York
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada